Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » Yanina Gavrilova no mahery fo voalohany amin'ny fizahan-tany Okrainiana
Awards • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao Mafana Okraina • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ny Hall of the International Tourism Heroes dia misokatra amin'ny alàlan'ny fanendrena fotsiny mba hahafantarana ireo izay naneho fahaiza-mitarika, fanavaozana ary fihetsika miavaka. Mandeha ny dingana fanampiny ny Maherifo momba ny fizahantany. Yanina Gavrilova izao no olona voalohany avy any Okraina izay nasaina, ary nekena ho tonga maherifon'ny fizahantany avy amin'ny World Tourism Network.
Ny tambajotra eran-tany momba ny fizahantany dia nanaiky an-dRamatoa Yanina Gavrilova hanatevin-daharana ny vondron'olona Maherifo momba ny fizahantany.
Nanomboka ny taona 2016 Ramatoa Gavrilova no Lehiben'ny Birao ao amin'ny Vondron'olom-pirenena, ny Fikambanan'ny Mpitari-tany Okrainiana
Yanina Gavrilova no mpanoratra taranja fiofanana lavitra ho an'ireo manampahaizana manokana momba ny informatika, mpitantana ary solontenan'ny Vondrom-bahoakam-paritra Mitambatra amin'ny sehatry ny fizahan-tany fizahan-tany sy ny toerana fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany "Fanombohana mahomby amin'ny fizahan-tany", fanofanana mazava ho azy ireo mpitarika fizahan-tany - "Fandaminana sy fitondran-tena fitsangatsanganana gastronomika ”.
Ny "Fikambanan'ny Mpizahatany Mpizahatany Okrainiana" no sendika lehibe eto Ukraine. Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra COVID-19 dia nampitombo ny isan'ny mpikambana ao aminy ny "Fikambanan'ny Mpizahatany Mpizahatany Okrainiana".
- Mpanazatra taranja fizahan-tany sy fomba fanabeazana ho an'ny olon-dehibe, mpanazatra ny DVV-International.
- Mpikambana ao amin'ny vondrona manampahaizana ao amin'ny masoivohom-panjakana misahana ny fizahantany any Ukraine (DART).
- Solontena any Ukraine an'ny Federasiona Eoropeanina an'ny Fikambananan'ny Mpizahatany sy ny Fikambananan'ny Mpizahatany.
Nandritra izay dimy taona lasa izay, Yanina Gavrilova dia namorona boky torolàlana.
- amin'ny teknika fandaminana ivotoerana fampahalalana ireo mpizahatany,
- momba ny fanomanana torolàlana fizahan-tany momba ny teknika fandikana ny lova voajanahary, kolontsaina ary tantara.
Hetsika manam-pahaizana fanampiny:
2014-2021 Yanina Gavrilova dia nandray anjara tamin'ny fananganana komity nandritra ny seminera sy fakan-kevitra mihoatra ny 50, atrikasa, fihaonambe ary forum ho an'ireo manampahaizana manokana momba ny info, mpitarika ny fizahan-tany ary mpitantana:
- Tetikasa 2021 Tetikasa USAID ERA Okraina, Mpanolo-tsaina ny Ivotoerana momba ny fizahantany momba ny fizahan-tany any Azov;
- nanao fiofanana ho an'ireo manampahaizana manokana momba ny TIC any Kyiv tamin'ny 2016-2018;
- nandray anjara ho mpandahateny lehibe tamin'ny Konferansa Voalohan'ny solontenan'ny TIC tamin'ny 2016 tao Lviv;
- 2019-2020 dia nanao andiana dinika ho an'ny mpitantana TIC any Dnipro, Chernihiv, Kherson;
- tamin'ny 2021 dia nanao consultation ho an'ireo matihanina momba ny fizahantany amin'ny fananganana TIC any Olevsk;
- 2012-2013 Manam-pahaizana momba ny tetik'asa Eoropeana "Diversification sy fanohanana ny fizahantany any Crimea";
- 2010-2012 Manam-pahaizana amin'ny asan'ny ivon-toerana fampahalalana fizahan-tany ao amin'ny tetikasa Chemonics International Inc, USAID / LINK;
- 2012. Nampiofana sy nianatra ho an'ny manampahaizana TIC Okrainiana any Estonia sy Suède.
Tao anatin'ilay fanendrena no nahazoana ity hevitra ity: olona mahatalanjona i Yanina izay manokana ny heriny sy ny heriny rehetra amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany. https://en.uaguides.com
Voasoratra ao amin'ny Yanina izao mahery fo.travel ary hanana fotoana voafantina ho Hero Hero an'ny Taona. Tsy misy fiampangana mihitsy.
Ny isan-taona na manokana Fizarana Hero Heroista dia atolotra an'ireo mpikambana voafantina ao amin'ny Hall an'ny Maherifo momba ny fizahantany iraisam-pirenena. Misokatra ho an'ny mpikambana sy tsy mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany. Tsy misy sarany.
The Loka mahery fo isan-taona ho an'ny fizahantany dia atolotra an'ireo mpikambana voafantina ao amin'ny Hall of the International Tourism Heroes.
Mila fanendrena roa farafaharatsiny mba ho dinihina amin'ity fanekena ity. Ny olona iray dia mety ho fanendrena tena. Na iza na iza afaka manolotra anarana na azo tendrena amin'ny www.heroes.travel